Ubukhulu beMpahla yokuThoma kweMadoda kunye nabasetyhini
Kunokuba nzima ukuthenga ubuninzi obukhulu, kwaye xa kuziwa kwiingubo ezizodwa, ezifana nokugqoka i- ski , kunokuba nzima kunzima. Ngethamsanqa, iinkampani ezininzi zivelisa kunye neengubo zokugqoka i-ski, kubandakanywa kunye nobukhulu beebhakethi ze-ski kunye neengqayi, kubafazi beentambo kunye namadoda.
Ngelixa kunokuba nzima ukufumana into oyifunayo kwiivenkile, ukuthengwa kwe-intanethi kuyindlela elula yokufumana ubuninzi beengubo ze-ski kwiixabiso ezifanelekileyo.
Nazi ezinye indawo ezifanelekileyo zokujonga:
Amazwe 'Ukuphela kwenza ukuba ubukhulu bendoda kunye nabasetyhini bezingaphandle, kuquka iipasta, iinqanawa, phantsi kweebhatyi kunye neengxowa zeplastiki ezikhuselekile, zonke ixabiso lentengo. Amazwe 'Ukuphela kweengubo ziyaziwa ngokuba ngumgangatho ophezulu kunye nokuzinza, ngoko unokuqiniseka ukuba ukuthenga kwakho kuya kuqhubeka ubuncinane bonyaka.
Efana nezoMhlaba, u-Eddie Bauer unikeza iingubo eziphezulu kunye nobukhulu beengubo zokugubha i-ski amadoda namabhinqa ngexabiso elifanelekileyo.
Kakade, musa ukulibala malunga neLL Bean, intando engapheliyo yabathandekayo bangaphandle. I-LL Ibhontshisi ithengisa iintlobo ezahlukeneyo zokutya zangaphandle. Khangela phantsi kwe-Men's Tall kunye ne-Women's Plus Size kwiwebhusayithi yevenkile.
I-Columbia, uphawu oluthile kunye nolwenyaniso olubizwa ngokuba yi-stellar basics, luvelisa kunye nobukhulu be-ski wear to men and women. Iibhatyi ze-ski, ibhulukwe, kunye neziqendu zesiseko kunye neendawo eziphakathi kwazo zonke ziyafumaneka ngobukhulu obukhulu, ngamanani amakhulu, nawo.
Ukuba ungumdlali we-skier oshaya iintlambo kuphela ngamaxesha ambalwa ngonyaka, musa ukulawula iWalmart. Ngethuba ungeke ulindele ukuphakanyiswa kwezinga eliphezulu - kunye nesambatho se-ski ngumzekelo obalaseleyo we-mantra endala, "ufumana oko uhlawulayo" - kodwa i-ski nganye ikhefu i-superstore ivame ukuvelisa kunye neengubo zangaphandle zangaphandle kwixabiso lamanani athengekayo.
I-Skier enhle iyinqaku lezembatho ezinika iintlobo ezahlukeneyo zokufakeka kwezinto eziphathekayo kunye ne-ski wear wear for both men and women. I-Skier enhle ayinayo i-website yayo, kodwa i-brand ithengiswa ngabathengisi abaninzi bezambatho.
Mhlawumbi i-shop eyaziwa kakhulu, kunye ne-shop size, uLane Bryant uthengisa iingubo zowesifazane ngobukhulu obukhulu. Phequlula ukhetho lwangaphandle lwewebhusayithi ukujonga iingubo ezifanelekileyo kwi-ski. Ukongeza, unokufumana iindlela ezithile ekukhethweni kwe-activewear, kwakhona, ezifana neendwangu zokugqoka phezu kweziqulatho ziseko kunye neempahla ezinqabileyo ukuba zigqoke.
I-Arctix ngumvelisi othengisa ubunxiba be-ski quality. Zininzi zezitayela zabo ezisisiseko ziyafumaneka kunye nobunzima. I-brand inikezela ngamabhinqa kunye namabhinqa kunye nobukhulu besibhakabhaka se-ski, kunye nobukhulu bebhola ye-ski kwiimpawu ezisisiseko nezithwala.
I-Top Online Skateboard Shops
Ukuhlaziywa kukaJackson Softec Umfanekiso weeSatifikethi
Eyona nto ibalulekileyo yokuPhupha kweMidlalo
I-Tommy Armor Brand kunye ne-Look Back kwi-EVO Driver
Amanthambo e-Ski amadoda aphezulu
Iingcebiso zokulungiselela ii-Invoyisi zabaThengi
Yiyiphi Iminyaka Engama-250 Yokukhunjulwa Esisifundise NgePompeii
I-SALAZAR Igama lomnqophiso kunye nemvelaphi
Unxweme olude kakhulu kwihlabathi
Indlela Yokujonganisa Iibhola Zeenkuthazi ngokukhawuleza
Amaqiniso Ngama-Unschooling Philosophy yeMfundo
Funda Umsebenzi weKhowudi Ukutshintsha njengeXesha loLwimi
I-10 yeeFilimu eziLona ziBhulu kunazo zonke ezingazange zenziwe
Imithetho kunye neLore yezinyosi
IQonga le-Golf ye-Open Open yase-Australia